လူသားအားလုံးအတွက်: လောက အမှိုက်
သတင်းဆိုက်တွေ ရေးလို့ ရအောင် ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဖဘက ကြည့်ချင်ရင် . . .
ပြောရမှာတောင် ပါးစပ်ကို အားနာတယ်. ဘာမှကိုပြောချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး। စပြီး ပျံ့နှံ့လာတုန်းက ဒီနေရာ မှာ ပထမဆုံး သွားကြည့်ဖြစ်တာ। အဲဒီ ထဲက ကော်မန့်တွေ တော့ အားတက်ဖွယ်ရှိတယ် ॥အမြင်တွေလဲ စုံကြတယ်။ အဲဒီ ကွန်မန့်တွေထဲမှာ ကျွန်တော် သဘောကျတာတွေ အများကြီးပဲ တစ်ခုလောက် ကူးပြ ပါရစေ। ပိုင်ရှင်လဲ ခွင်ပြုပေးပါရန် တောင်းဆိုပါရစေ ခင်ဗျာ။
အဘိုးကြီး အဘွားကြီးတွေ ဒီခေတ်ရှိုးပွဲတွေသွားမရလိုထင်ရဲ့။ အသုံးမကျတဲ့ ဘုန်းကြီးရူးရဲ့ ရှိုးပွဲလာပျော်ကြတယ်။
သွားစမ်းပါ IC တို့ရှိုးပွဲတွေ၊ မြန်မာရှိုးပွဲတွေ
မြင်ရသလောက်ကတော့ ကာမစိတ်ဓါတ်တွေ မြှင့်နေကြသလိုပဲ။
ဘုန်းကြီးမဟုတ်လိုလား။ ဘုန်းကြီးစာ နလပိန်တုန်းလား။
ငါတို့ ထေရ၀ါဒ စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ရေးမှာ
ဘာသာရေးရှု့ထောင့်က မြင်ရသလောက်ကတော့ ကန့်လန့်တွေကြီးပဲ။
ကန့်လန့်ဆိုတာ ပါဠိစကားလုံးနဲတော့ တိရစ္ဆာန ပဲ။
ဒို့ရဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ ဘာသာကို
တိမ်ညို တိမ်မဲတွေ အမိုးမခံနိုင်ဘူး။
အင်း........ စိတ်လျော့ ဘဘဂျီး
မင်နီနဲ့ရေးထားတဲ့ကော်မန့်ကို တော်တော်လေး သဘောကျတယ် ရိုင်းပြတဲ့ အသုံးအနှုန်းမပါပဲကို
ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့ ဝေဖန်နိုင်စွမ်းအား မရှိကြောင်းပါ
(ကိုယ်မမြင်နိုင်တဲ့ လှည့်ကွက်တွေက နောက်ကွယ်မှာ အများကြီးကိုးဗျ)
အီး . .နာ့နာမည်ကြီးနဲ့ လုပ်ထားပြန်ပြီ။
အမှိုက်ကတော့ နေရာစုံ မျိုးစုံပါပဲလေ။